प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र राजदूत सिफारिसको पारदर्शिताको सूचना चाहियो
संक्रमणकाल भनेको संवेदनशील समय हो । एकप्रकारले नारीको प्रसूति अवस्था जस्तै हो भनिन्छ । अलिकति तलबितल पर्ने बित्तिकै समस्या पर्ने । बडो सन्तुलित अवस्थाको अपेक्षा । यस्तै भएर संक्रमणकालको न्याय व्यवस्था झन चुस्त, सन्तुलित र कसैले पनि औंलो ठड्याउने खालको हुनुहुँदैन भनेर संक्रमणकालीन न्यायका लागि बेग्लै व्यवस्था गरिन्छ जसले न्यायको अनुभूति पनि देओस् र सन्तुलनमा पनि अप्ठेरो नपारोस् ।
पत्रकार महासंघलाई जोगाउने हो भने..
नेपाली पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ यतिबेला २५ औं महाधिवेशनको दौरानमा छ । श्रमजिवी पत्रकारहरुको हक, हित र सुरक्षा साथै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा वकालत गर्दै आएको महासंघको भावी नेतृत्व चयनका लागि पत्रकारहरु दौडाडौडमा छन् । आगामी २०७४ बैशाख २१ गते तदनुसार मे ३ तारिख अर्थात् ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस’का दिन कुनै ‘महाविपत्ती’ आइपरेन भने महाधिवेशनको भब्य उद्घाटन हुँदैछ ।
नेपालमा बाँस क्रान्तिको खाँचो
पेशल आचार्य- देश बनाउन भिजन चाहिन्छ । भिजन राजनेता र चिन्तक एवम् दार्शनिकहरूले दिन्छन् । हुन त सामान्य पेसा र सीप भएका मानिसमा पनि भिजन हुन्छ तर तिनीहरूको भिजनको कुनै सरोकार नराख्ने चलन गरिब र विकासोन्मुख देशमा चलेको छ, जुन पंक्तिमा हाम्रो नेपाल पनि पर्छ ।
जनता विदेशमा पसिना बगाएर कमाउँछन्, नेता विदेशीसँगै हात फैलाउने !
आदित्यमान श्रेष्ठ-- नेपालीहरु कुनै बखत गरिब थिए तर स्वावलम्बी थिए । आज पनि नेपालीहरु गरिब छन् तर स्वावलम्बी भएको ठान्दैनन् । त्यसको मुख्य कारण हाम्रा नेताहरु सबैसित मागी हिंड्ने र खाते बानी देखाउनाले हो ।
महाभारतकी कुन्ती —९
हरिविनोद अधिकारी- यो जीवनको अन्तिम घडीमा मलाई के लागिरहेको छ भने कर्णमा साह्रै नै सहनशीलता थियो र कर्म अकर्मको विभेद उसलाई बढी नै थियो । मेरा आफ्ना भनेका तीन भाइ छोरा, बहिनी माद्रीका दुई भाइ छोरा र मेरो पहिलो सन्तान कर्ण या बसुसेण वा बसुसेनका चरित्रहरु अहिले जब केलाउँछु, लाग्छ सबैभन्दा उम्दा चरित्रको कर्ण नै थियो किनभने उसले आफूलाई समाजका लागि न्यौछावर गरेको थियो । सत्य र इमान्दारिताका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नेमा भावी दिनमा कर्णको नाम आउला भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रहरी, नीलो बर्दी र श्याम खत्री
गृष्मा राजभण्डारी----- नेपाल प्रहरी । सत्य, सेवा र सुरक्षा । उसको मूल मोट्टो अर्थात् मन्त्र । आम नागरिकको सेवामा हरदम समर्पित रहने कसम खाएर सेवा प्रवेश गरेका बर्दीधारीहरुको संगठन । सत्य, निष्ठा र सुरक्षा पहिलो कर्तव्य । आम मानिसले भर गर्ने, विश्वास गर्ने संगठन । नीलो रङको बर्दीमा प्रहरी देखेपछि निर्धाहरुले सुरक्षाको अनुभूति गर्ने विश्वास । त्यही बर्दी दुःख र अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिलाउने भरोसा । अनि त्यही बर्दी अन्यायी, ब्यभिचारी, दुष्कर्ममा लिप्तहरुका लागि दण्डको प्रतिरुप । अनाचार, दुराचार, अनियमितता, घुसखोरी, नैतिक पतनमा लागेकाहरुलाई दण्ड दिलाउने पहिलो खुड्किलो । समग्रमा नेपाल प्रहरीको चिनारी यिनै हुन् ।
न्यायपालिकाको गिर्दो साख
नरेन्द्रराज पौडेल - संघीय उच्च अदालतका लागि हालै भएको न्यायााधीश नियुक्ति प्रकरणले काग कराउँदै र पिना सुक्दै गरेको आहान चरितार्थ गरायो । अन्तर्राष्ट्रिय विधि प्रक्रिया तथा आफ्नै देशको कानून र नैतिकताको हिसावले पनि सर्वथा उचित नदेखिने यस्तो निर्णय गर्न गराउन स्वयं न्यायपालिका प्रमुख र सरकारसमेत हाकाहाकी लागिपरे ।
महाभारतकी कुन्ती —८
हरिविनोद अधिकारी - कस्तो हुँदो हो एउटी मानव कन्या माछाको पेटमा आरामसँग आमाकै कोखमा जस्तै बस्दा ! त्यस्तो भएकै होला नि त ! नभए स्वयं राजमाताकै छोरा व्यासले यो कुराको गोप्यता सबैलाई भनेकोले नै थाहा भएको हो । नत्र कसलाई पो थाहा थियो र ? स्वयं पराशर ऋषिलाई थाहा थियो कि ? नत्र घुम्दै घुम्दै त्यही दासराज धीवरको माछाको पेटमा रहेकोले उहाँको शरीरबाट माछाको गन्ध आउँथ्यो रे, त्यो पनि चारकोससम्म आउने गन्ध ।
चुनावमा ‘राइट टु रिजेक्ट' चाहियो
पेशल आचार्य - देश र जनता भन्नु सहयात्री हुन् । अझ सगोत्री हुन् । देशको भविष्य जनताको जस्तै हुन्छ र यो सँधै तरल हुने गर्छ । खासगरी अल्पविकसित देशको भविष्य दिन, महिना र वर्षमा तुलना गर्ने गरिन्छ । जसरी अहिले नेपालको भविष्यको गणनागर्ने गरिएको छ । नेपालले संविधान प्राप्तिका यी १७ महिनालाई मध्यनजर गर्दै टाइम लाइनअनुसार हिँडेको थियो भने अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संसदीय चुनावको खाका कोर्दै हुन्थ्यो । देश लगभग ट्रयाकमा आइसकेको थियो ।
निर्लज्ज, बेसरम र निर्विवेकीहरुलाई चुनौती ‘विवेकशील नेपाली’
प्रजापरिषद देखि सुरु भएको नेपाली राजनीतिक दल बन्ने प्रक्रिया आजपर्यन्त नयाँ/नयाँ पार्टी र दलको नाममा दर्ता हुने, गठन-बिगठन हुने, बन्ने-भत्कने,मोटाउने-दुब्लाउने, टुट्ने-फुट्ने, जुट्ने-मिल्ने, अस्तिवमा रहने नरहने आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वले चीर स्थाई हुने देखि बिलाएर जाने सम्म हुँदैछन् । राजनीतिमा यसलाई सामान्य अर्थमा बुझिन्छ तर कहिलेकाही समयले भिन्न रुप, रंग साज, सजावट हाउ, भाव नयाँसोच, नयाँशैली र नयाँ घटनाक्रमको ‘डिमाण्ड’ गर्छ र कोहि नवीनतम रुपमा आओस भन्ने अपेक्षा गर्छ ।